Etu ị ga - esi gbanye arụmọrụ ahịa gị maka ịbawanye arụmọrụ | Martech Zone
You na - agba mbọ ịkwalite nrụpụta ọrụ gafee azụmaahịa gị? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụghị naanị gị. ServiceNow kọrọ na ndị njikwa taa na-emefu ego Pasent 40 nke izu ọrụ on ndutịm aga-eme-pụtara na ha nwere ihe karịrị ọkara izu na-elekwasị anya na mkpa usoro ọrụ.
Ozi ọma ahụ bụ na e nwere azịza: arụmọrụ na-arụ ọrụ arụmọrụ. Pasent iri asatọ na isii nke ndị njikwa kwenyere na usoro ọrụ akpaghị aka ga-abawanye arụmọrụ ha. Na Pasent 55 nke ndị ọrụ enwere obi uto banyere olile anya nke sistemụ arụmọrụ na-agbanwe ọrụ ugboro ugboro.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwụnye atụmatụ maka ngwa ọrụ aka gị nke ọma, tụlee itinye ụdị ntanetị dị n'ịntanetị. Mpempe akwụkwọ ntanetị bụ ngwa ọrụ dị ukwuu maka ijikwa azụmahịa dijitalụ nke ọma, ha nwere ike inyere ngalaba ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ gị aka iwepu ọrụ na-agwụ ike na arụmọrụ ha.
Ndị otu ahịa nwere ike irite uru karia iji teknụzụ ụdị ntanetị iji mepụta usoro akọwapụtara. Ndị a bụ ụzọ ole na ole dị mkpa dị n'ịntanetị nwere ike melite arụmọrụ ahịa maka ịbawanye arụmọrụ:
# 1: Chekwaa oge na ụdị ejiji emepụtara
Mbọn bụ nnukwu akụkụ nke ịzụ ahịa. Ihe niile ngalaba ngalaba ahia gị na - eme n’ihu ndị ahịa — gụnyere ụdị dị n ’ntanetị - kwesiri ikwekọ n’otu ụdị ika gị. Ma imepụta ụdị akara site na ncha nwere ike ịbụ nnukwu oge.
Tinye onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị.
Otu ụdị ntanetị nwere ike inyere ngalaba azụmaahịa gị aka ịmepụta ngwa ngwa ma bipụta ụdị ndị a ma ama iji kpokọta ndị ọzọ na-eduga. Nrụpụta ihe eji arụ ọrụ na-enye ndị otu gị ohere ịtọ ụdị agba na akwụkwọ edemede na bulite logos na-enweghị ihe ọmụma nzuzo! Nwere ike ibido ụdị akwụkwọ ntanetị na ntanetị na ntanetị na enweghị nsogbu.
Chọrọ ihe akaebe na-arụ ọrụ? Ike njirimara dị mfe na mpempe akwụkwọ nwere ike ịpụta site n'aka onye na-ewu akwụkwọ ntanetị nyere aka otu mahadum mee ka nleta nke ụlọ akwụkwọ site na pacenti iri anọ na ise wee mee ka ndebanye aha ndebanye aha situe iri asaa na abụọ.
# 2: Ọsọ ọsọ na nakọta nhọta ndị ruru eru
Nakọta ndị ruru eru maka azụmahịa bụ ihe kachasị mkpa maka ọtụtụ ngalaba ahịa. Site n'iji ụdị mpempe akwụkwọ n'ịntanetị rụọ ọrụ iji rụọ ọrụ nchịkọta ụzọ ga-arụ ọrụ dị oke mma.
Site na ngwa ụdị ntanetị, ndị ahịa nwere ike ịmepụta ụdị ndebanye aha, ụdị kọntaktị, nyocha ndị ahịa, ụdị nbudata ọdịnaya, na ndị ọzọ maka nchịkọta nchịkọta dị mfe. Ha nwekwara ike iji ụdị nchịkọta atụmatụ iji chọpụta obere nsogbu dị n'ụdị ahụ ma mee ngwa ngwa iji bulie ọnụego mgbanwe.
One ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ tinye nke a n'ule ya na onye otu ndi oru ahuike wee nyere onye ahia a aka ichikota ma jikwaa ihe ntinye aka 1,100 gafere mba 90 n'ime ubochi iri ato. Agencylọ ọrụ ahụ gbakwara ntụgharị nke ụdị ndebanye aha site na pacenti iri na otu.
# 3: Mepụta ebe a na-enweta ihe ọmụma maka data na-eduga
Ozugbo anakọtara data ndu, ọ dị mkpa ka ndị ahịa (na ndị na-ere ahịa ahịa) nwee ohere ịnweta ya ka ha wee nwee ike soro ma nyochaa ogo nke ndu na ịgbaso mgbe ọ dị mkpa. Onye na-ewu ụdị ntanetị nwere ike ime ka usoro a dị mfe.
Enwere ike ịchekwa data anakọtara site na mpempe akwụkwọ n'ịntanetị na ahaziri ahazi, nkekọrịta data, na-ekwe ka ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa lelee ma debanye akara, ajụjụ, na ndu. Enwere ike ibugharị data ahụ na ngwaọrụ ndị ọzọ ndị otu na-eji, dị ka usoro ahịa email ma ọ bụ njikwa mmekọrịta ndị ahịa.
Gosiputa oru ahia gi site na nhazi oru nwere ike inwe mmetuta di ukwuu na ntinye oru nke ngalaba. Iji mpempe akwụkwọ na-ewu ihe n'ịntanetị iji mepụta ụdị akara maka ngwa ngwa nchịkọta na ijikwa data na nchekwa data nwere ike ịchekwa ndị na-ere ahịa oge ụfọdụ. Boostkwalite mmepụta nke ndị ahịa gị nwere ike ịbụ ụzọ mbụ iji mepụta arụmọrụ na-aga nke ọma ma na-aga nke ọma na azụmaahịa gị.
Tags: chịkọta nduụdị infographicmpempe akwụkwọogwe ozindu nduonye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetịruru eru na-edugaụdị ntanetị weebụụdị weebụ